Hoggantoota,Miseensota,Deeggartootaa fi mararfattoota ABO eenyutu hiisisaa jira? – Kichuu
Hoggantoota,Miseensota,Deeggartootaa fi mararfattoota ABO eenyutu hiisisaa jira?
GODINA I/A/BOOR fi JIMMAA IRRATTI
1, #Toleeraa_Adabaa – qabsaa’aa gameessa kan turan yoo tahu erga dhaabni ABO gara biyyaa galee as Obbo Toleeraa Adabaa bakka qabsaa’onni isaan beekan irraa gad of buusuun yeroo adda addaatti seerdhablummaa dhaaba ABOn ala socho’aa kan turan yoo tahu erga Adoolessa 25/2020 as ifatti as bahuun dirqama dhaabni isaa ABOn itti kennee fi qabsaa’onni isa irraa eegan dagachuun ergama PP fudhachuun wahillan isa fakkaatan waliin ABO diiguu irratti xiyyeefate.
ABO diiguun kan hin milkoofne tahuu kan hubate obbo Toleeraan akkuma wahillan isaa warra isa fakkaatanii miseensota ABO dirqama irra jiran addatti Godina Iluu Abbaa Boor fi Jimmaa keessatti maqaa isaanii dabarsee tika ppf kennuun hiisisaa jira. Sababni isaas Toleeraa Adabaa Yeroo dirqama Dhaaba ABO of irraa qabutti Godina Iluu Abbaa Boor fi Jimmaa waan hogganuuf sirnaan beeka ture.
Miseensonnii fi hoggantootni godina kana dabalatee Aanota godina kana keessa jiran hundi guyyaa ABO obbo Toleeraa irra qoqqobbii kaa’e Adoolessa 11/2020 booda irraa qabee quunnamntii kam iyyuu adda kutuun kaayyoo fi Akeeka ABO galmaan gahuuf hojjetaa osoo jiranii erga anaaf hin ajajamnee isiniin hiisisa jedhee doorsisaa kan ture Toleeraan Miseensotaa fi gaggeessitoota Godinoota kanneenii hiisisuutti xiyyeeffachuun hiisise. Akka Kanaan namoota Obbo Toleeraa Adabaa hiisise adda dureen kan gaggeessitoota godinaa tahan keessaa qabatamaatti kan beekaman:
1, Mahaammad Amiin Faaris Barreessaa Waajjira ABO godina Iluu
2, Masqaloo Badhaasaa gaggeessaa liigii dargaggoota ABO waajjira Mattuu
3, Bar/sa Dhaabaa Gammachuu
4, Dabaloo Kabbadaa
6, Bulchaa Taammiruu
8, Tasfaayee Tolasaa fi
9, jaal Gammachiis Tolasaa bakka Toleeraa Adabaa bu’uun kan Godina kana lamaan akka hogganu godhame hojiif gara sana deemee achumaan qabamee hidhame.
SHAGGAR KAABAA IRRATTI
2, #Ibsaa_Nagawoo fi #Bareentoo [Sintaayyoo Gadaa]
Ibsaa Nagawoos dirqama ABO itti kenneen godina Kaaba shaggar gaggeesuutti dirqama fudhatee waan tureef caasaa Kaaba shaggar hanga wallootti namni miseensota dhaabaa hiisisaa fi ajjeesisaa jiru isaa fi wahila isaa Sintaayyoo tahuu ragaan arganne ifa godha. Akka fakkeenyaatti Ibsaa Nagawoo gara Walloo gaafa deemu Qeerroon Bilisummaa Oromoo walloo fi Ummmatni Walloo Ibsaan dhufuu gaafa dhagahan bakka inni jirutti deemuun tika mootummaa maaliif nutti fiddan jechuun jila ABO isa waliin gara sana imalan illee lola irratti bananii tura.
Jiraattotni Walloo akka jedhanitti Ibsaa Nagawoo sabboontota ijoollee walloo kan qabsiisee hiisisaa jiru Ibsaadha inni Tika ppti jaal Yaasoo Kabbabaa kan hiisises isadha kanaaf asii nurraa balleessaa jechuun hanqaaquu mataa isaa irratti cabsuuf gaafa jedhan Qeerroon Walloo jaal Amaan Filee fi Jaal Lammii Beenyaa Qeerroowwan kana kadhachuun akka Ibsaa Irratti Hanqaaquu mataa isaarratti hin canbne goosisanii salphina isa oolchanii akka dhaqeen guyyaa tokko qofa bulee konkolaataa dhufeen dirqama itti kenname waan uummani walloo isa ariiyeef dhiisee deebi’e jaalan hafan jiraattota walloo waliin mariiyataa turanis.
Ibsaa Nagawoo Fi Sintaayyoo Gadaa Kaaba shaggar dabalatee giddu-galeessa shaggar keessatti tika pp waliin tahuun namoota hedduu hiisisuun mana hidhaatti guursisaa jiru.
1, Yaasoo Kabbabaa Qondaala ABO
2,Kaayyoo Fufaa MGS ABO
3, Boonsaa Haayiluu
4, Abii Magarsaa
5, Abdallaa Taammana
6, Bar/sa Toleeraa Nagaasaa
8, Mangistuu Baqqalaa
9, Daadhii Mokonniin
10, Aliyyii Huseen
11, Idiriis Yusuuf
13, ogeessa Fayyaa Mo’aa Abdiisaa akka fakeenyaatti kaasuu dandeenya
GODINA HARARGEE IRRATTI
3, #Araarsoo_Biqilaa fi #Atoomsaa_Kumsaa
Araarsoo Biqilaa Fi Atoomsaa Kumsaas dirqama tika pp irraa fudhataniin miseensota ABO isin jala hin hiriirru isin warra kaayyoo fi akeeka jaallan keenya kufanii gatedha jechuun gaafa isaan waliin dalaguu didan namoota armaan gadii kana adda dureen kan isaan hiisisan akka fakkeenyaatti kaasuuf malee guutummaa baha Oromiyaa keessatti miseensota ABO kan hiisisaa jiran maqaa miseesnotaa kennuun isaan lamaanidha.
Akka fakkeenyaatti namoota Araarsoo Biqilaa Fi Atoomsaa Kumsaa Hiisisan
2, Aliyyii Callaa
4, Firoomsaa Yuusuuf
5, Gammadaa Abdullay
6, Guutuu Fu’aad
7, Michuu seenaa
8, Diinee Aliyyii Adullaa
9, Anuwaar Mahaammad Aliyyii
10,Baariddin Ibraahim Mahaammad
11, Obsaa Muusaa Umaar
12, Abdii Usmaan Muummee fi kanneen biro hedduu maqaa tarreessinee fixuun dandeenye kanneen akka fakkeenyaatti kaasnudha.
Akka walii galaatti gantootni ABO keessatti of ijaartee Qarshiin jijjiiramte kunneen gaggeessummaa Ibsaa Nagawoo fi Qajeelaa Mardaasaa jalatti taliigamuun miseensota ABO waajjira Finfinneerra dalaganis kan hiisisee akka isaan hin hiikamne gochaa jiru garee Qajeelaa Mardaasaa kanadha.
Akka fakeenyaatti Jaal Abdii Raggaasaa fi Amaan Filee irraa hanga misesnota guyyaa mudde 20/2020 mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramaniitti kan qabsiisaa jiran Finfinnee mana jireenyaa isaanii keessaa Qajeelaa Mardaasaa fi Ibsaa Nagawoo ,Baarentoo Gadaa tahuu ragaan arganne ifa godha haasaa isaan bilbilaan namoota waliin godhan kan nu qaqqabee jiru qabannee raga adabalataa funaannannee sagalee isaaniis Uummataf gadi ni baasna lakkoofsa bilbilaa isaan ittiin bilbilan waliin ni maxxansina.
Uummanni Keenya Oromiyaa keessa jiraattanii fi Oromiyaa ala jiraattan namoota armaan olii kana waliin tahuun kanneen sabboontota sabaa hiisisaa ajjeesisaa jiran irratti ifatti tarkaanfii of irraa ittisuu fi qabsoo sabaa baraaruu akka fudhattaniif waamicha isiniif goona.
#Hub Miseesnonni ABO har’a qabaman Qajeelaa Mardaasaa Ibsa Boordiin Filannoo guyyaa lama dura baaseen aaree warreen kun MGS ABO waan tahaniif hanga Korri Sabaa Gaggeeffamutti akka hidhaman irratti hojjetee akka hiisise ragaan arganne ifa godha. Ammas miseensota ABO hedduu hiisisuuf maqaa kennanii akka jiran keessa beektota irraa ragaan arganne ifa godha garuu ABOn jiraataadha dhalootaan galma gaha qabsoonis fiixa ni baha jennaa.
Paartiin PP, damee Amaaraa kitaaba qondaala Ginboot- 7 duraanii fi ajajaa poolisii Naannoo Amaaraa yeroo ammaa kan ta’e eebbisiise. Eebba kitaabaa Komishnier Addaamuu Abbaree kanarratti hoggantoonni Tikaa Biyyoolessaa Itoophiyaa, Daarektaraa fi I /Aanaa Dareekteraa, dabalatee qondaalonni hedduun Finfinneetti argamuun eebbisanii jiran.
Keessattuu gaafatamaan basaasaa Itoophiyaa Tamasgeen Xurunaa fi itti aanan isaa Indaashoo Xaasoo, Yohaannis Booyyaaloo, Ministeera Galiiwwanii Laqaaw Ayyaaloo sagantaa kanarratti haasaan taasisan qoqqooddaa keessoo PP kan ibsuudha jedhameera.
Abbootiin qabeenyaa Amaaraa lama tahanis kitaaba kana birrii miliyoona 1.6n bitanii jiran.
Karaa biraatiin dabballoonni PP damee Oromiyaa ibsa Abbaaree Addaamuu torbee darbe qeeqaa turan har’a yeroo namni kun Finfinneetti dhufee kitaaba leellistota Nafxanyaa kana eebbisu waan arganis, dhaga’anis hin fakkaatu. Yeroo dhiyoo asitti Naannoon Amaaraa hojiilee fi sagantaa mootummaa naannichaa hedduu isaa Finfinneetti raawwataa jiraatuun isaan ni beekama.FSM irraa
Gantootaa fi Hayyalaallattootaan dhaabni ABO hin diigamu.
ABOn akka hin baqnee fi akka hin bannetti Handhuurame gaafa hundeeffame.
Ibsi Maqaa ABOn Hoteela Hilton keessatti kenname beekamtii Hoggaanaa Dhaabichaan ala jedhame.